Olee otú Tinye ndepụta okwu ka MP4 Files na Mac / Win (Windows 8 gụnyere)
1 Subtile Ngwaọrụ
1.1 Ndepụta Okwu Editors
1.2 Ndepụta Okwu eso
1.3 Ndepụta Okwu Players
1.4 Ndepụta Okwu Nsụgharị
1.5 Ndepụta Okwu converters
2 Download ndepụta okwu
2.1 Download ndepụta okwu maka DVD Movies
2.2 Download Hulu ndepụta okwu
Ma gụọ 2.3 Download Youtube ndepụta okwu
3 Tinye ndepụta okwu
3.1 Olee otú iji Tinye ndepụta okwu
3.2 Tinye ndepụta okwu ka MP4
3.3 Tinye ndepụta okwu ka MKV
3.4 Tinye ndepụta okwu ka AVI
3.5 Tinye ndepụta okwu ka DVD
4 wepụ ndepụta okwu
4.1 aghụghọ wepụ
Olee otú Tinye ndepụta okwu ka MP4 Files na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Achọ a hassle-free ụzọ tinye a sobtaitel gị MP4 video? Ọ ga-abụ a nnukwu ihe ma ọ bụrụ na ị na-ahụ nri software. A nkuzi ga-egosi gị otú ị tinye ndepụta okwu ka MP4 videos tupu ị mara ya.
Part 1: Olee ịgbakwunye ebudatara ndepụta okwu gị MP4 video
Part 2: Dezie gị onwe gị ndepụta okwu ike ọhụrụ MP4 nkiri
Ibu Ibu gị chọrọ ndepụta okwu ọ bụla format nkiri na ị nwere, anyị ukwuu tụrụ aro anyị Video Converter Ultimate (Windows 8 na-akwado). Na ya, i nwere ike tinye ndepụta okwu ka MP4 video maka ma na-azọpụta ka a video faịlụ na-egwu fọrọ nke nta n'ebe ọ bụla, ma ọ bụ na-ere ọkụ na-DVD nke na-ekiri na TV. All ga-eme software. Ọ dịghị echichi nke-atọ ndị ọzọ ngwaọrụ dị mkpa.
Gịnị video na sobtaitel formats na-akwado?
Video formats: MP4, AVI, MKV, WMV, mpg, MPEG, VOB, Tod, MOD, FLV, na ihe nile mgbe nile video formats.
Ndepụta Okwu formats: SRT, ịnyịnya ibu, SSA
Mgbe na sobtaitel faịlụ site na internet (ọtụtụ n'ime sobtaitel faịlụ ndị na .ass na .ssa faịlụ ndọtị.), Anyị na-eji mkpa Video Ntụgharị (Windows 8 na-akwado) ka jikota sobtaitel na MP4 video n'ime ọhụrụ faịlụ ma ọ bụ jidesie DVD. Ugbu a na-agbaso mfe nzọụkwụ na-etinye ndepụta okwu on MP4 video na a flash.
Nzọụkwụ 1: Import MP4 enweghị ndepụta okwu
Mgbe arụnyere a sobtaitel ka video Ntụgharị (Windows 8 na-akwado), na-agba ọsọ omume na mbubata gị MP4 video site na-adọkpụpụta video ka isi windows, ma ọ bụ site na ịpị "Tinye Files" button aka ịchọta MP4 video na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2: Tinye sobtaitel ka MP4 video
Mgbe MP4 video-egosi na ihe bụ isi windows, nri pịa ya site na ndepụta ma họrọ "Dezie" button ẹkedori video edezi window. Na-aga "Ndepụta Okwu" taabụ ke n'elu. Mgbe ahụ Ibu Ibu mpụga sobtaitel faịlụ srt, ssa, ịnyịnya ibu site na ịpị "+" button imeghe sobtaitel ndọpụta ndepụta. Mgbe sobtaitel na n'elu, ị nwere ike ịhụchalụ na ọ na a kwesịrị ekwesị oge na sobtaitel na preview windows. Ndabara ịke ga-etinyere. Site ịlele na "T" nhọrọ E wezụga, i nwekwara ike ime ka a omenala sobtaitel ịke site font, agba, size, ọnọdụ, nghọta, wdg Mgbe ị na-enwe obi ụtọ na MP4 sobtaitel, pịa "OK" button iji gosi ntọala na nloghachi ka isi window.
Cheta na: I nwekwara ike arapara a ederede watermark ma ọ bụ oyiyi watermark gị MP4 video ke n'elu video edezi window.
Nzọụkwụ 3: Export MP4 video na sobtaitel ma ọ bụ ọkụ MP4 ka DVD
Ugbu a ọ bụ oge ịzọpụta sobtaitel ka MP4 video-adịgide adịgide. Firstly, họrọ a chọrọ mmepụta format site na ịpị "mmepụta Format" nhọrọ n'akụkụ aka nri. Mgbe ahụ, họrọ a video format ma ọ bụ preset formats maka iPhone, iPhone, iPod, iPad. N'ikpeazụ, pịa "tọghata" button na-amalite akakabarede. The sobtaitel ga-ede na-adịgide adịgide na mmepụta video. Ọ bụrụ na ị chọrọ ọkụ MP4 ka DVD na sobtaitel, ị nwere ike kpọọ ya ọkụ ke "Ọkụ" interface.
Ị na-mere. Na Video Ntụgharị, i nwere ike tinye ndepụta okwu ka MP4 video maka ịkpọ ma na kọmputa, ngwaọrụ ma ọ bụ TV.
Nkebi nke 2: Dezie gị onwe gị ndepụta okwu ike ọhụrụ MP4 nkiri
Ka ịgbakwunye ndepụta okwu gị dere MP4 obere vidiyo, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) (Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac))-eme ka ọ mara mma mfe. Nke a na usoro-enye a sara mbara ederede ndebiri i nwere ike iji tinye captions n'ihi na mma nkọwa. Download a free ikpe ebe a:
Nke a na usoro dị na ma Windows na Mac n'elu ikpo okwu. Biko download nri version ka kwa gị sistemụ. Na-esonụ, Windows version ẹka dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 1: mbubata gị isi iyi MP4 faịlụ
Ẹkedori a usoro ma họrọ "16: 9" ma ọ bụ "4: 3" akụkụ ruru ka ịbanye isi window. Wee pịa "Import" Ibu Ibu gị MP4 vidiyo si na faịlụ nchekwa na kọmputa gị. The dị obere vidiyo ga-egosi dị ka thumbnails na ekpe ebi ndụ.
Mgbe ị na Ibu Ibu niile MP4 faịlụ gị mkpa, nanị ịdọrọ na dobe ha ka ha Video usoro iheomume.
Nzọụkwụ 2: Tinye ndepụta okwu ka MP4 video na hazie ya
Ugbu a ịgbanwee gaa na Ederede taabụ, na mgbe ịdọrọ ọkacha mmasị gị template ebe ị chọrọ na usoro iheomume. Ugbu a ị ga-ahụ a ederede thumbnail agụ "T".
Ugboro abụọ pịa ya ka ịnweta ederede nchịkọta akụkọ panel, ebe i nwere ike pịnye na gị onwe gị ederede, na hazie font, agba, na-aga aga, wdg ka amasị gị. Mgbe ahụ, pịa Play akara ngosi na-ịhụchalụ ezigbo oge mmetụta.
Mgbe ndepụta okwu abata nri ebe gị MP4 video, ịdọrọ Text faịlụ oge ka ​​mmekọrịta gị na video. Ka ọ dịgodị, A usoro iheomume Zoomer dị ka ibubaa / si na usoro iheomume-enyere gị aka ịchọta kpọmkwem ebe ị chọrọ.
Nzọụkwụ 3: mbupụ a ọhụrụ nkiri
Mgbe ihe nile bụ dịkwa mma, kụrụ "Mepụta" mbupụ a ọhụrụ MP4 faịlụ gụnyere na ndepụta okwu. Na mmepụta window, ị nwere ike họrọ MP4 si "Format" taabụ, ma ọ bụ na-aga "Devices" taabụ bulie a ngwaọrụ icon dị ka "iPad" zọpụta ya na kọmputa gị. Ị pụrụ ọbụna ịkọrọ gị kere eke kpọmkwem jidesie YouTube, ma ọ bụ gbaa ya ka a DVD disk.
The n'elu abụọ ụzọ na-esure ndepụta okwu ka MP4 video ga-azọpụta unu a otutu oge na nsogbu. Ọ bụrụ na mkpa, ị nwekwara ike ime ka ndị ọzọ video edits na Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor), dị ka bugharia, ewepụtụ, ịkpụ, kpatụ ìhè, iche, itinye ndabere music, ikwu n'ụzọ, visual mmetụta na ndị ọzọ. Na otú ahụ, i nwere ike inwe ihe ndị kasị gị MP4 faịlụ. Dị nnọọ download usoro ihe omume ka a na-agbalị. Ị ga-n'anya ya.
Top 10 Ndepụta Okwu converters
Top 10 Ndepụta Okwu Nsụgharị
Olee otú iji belata hà MP4 (MPEG / mpg) Video
Olee otú iji tọghata M2TS ka MP4 Easily (Yosemite gụnyere)
Top 10 HD MP4 Movies nrụọrụ
Ndi PS3 Play MP4? Kedu ihe ọ bụ?
15 Ụzọ bugharia MP4 on Mac na Windows
Olee otú iji tọghata VIDEO_TS ka MP4 na Windows na Mac
Olee otú iji tọghata MP4 ka MPEG / MPEG-1 / MPEG-2?
Olee otú iji tọghata MP4 ka MOV na Zero Ogo Loss
> Resource> MP4> Olee otú iji Tinye ndepụta okwu ka MP4 Files na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)